Mumvuri wecypress wakareba, iyo inokurudzira inoverengeka naMiguel Delibes | Zvazvino Zvinyorwa
Iyo mumvuri wecypress wakareba, naMiguel Delibes
John Ortiz | | Biography, Vanyori, Mabhuku, Novela, Nyaya
Mumvuri wecypress wakareba.
Mumvuri wecypress wakareba ibasa rakanyorwa naMiguel Delibes Setién muna 1948. Inotorwa senhau yekudzidza panofa rufu rwunofumura kusagadzikana kwekusingaperi kwemunhu, ndokushandurwa kuita mamiriro ezvinhu ake. Mukupesana, rudo rwunoita basa rekusarudza muhukama hwepasi rose.
Iko kutya kwekutambudzika kunoratidzirwa sechisikigo chinokonzeresa kuti kuvepo kusava netariro kunodzora vanhurume vanopokana venhoroondo.. Saizvozvowo, chiKristu chinokonzeresa kugamuchirwa kwekurasikirwa nepfungwa. Chekupedzisira, manzwiro okusurukirwa uye dongo anokundwa nekuda kwehunhu hwakanaka senge kuda, hunhu, uye dzidzo.
1.1 Kutanga kwayo mutsamba
1.2 Yakawandisa katarogu
1.3 Miguel Delibes uye cinema uye theatre
1.4 Maonero akatsoropodza nzanga
1.5 Iyo mibairo panguva yake yebasa uye kupera kwemazuva ake
2 Ongororo yekufungidzira yeruzivo
Miguel Delibes Setién aive akakurumbira wechiSpanish akaberekerwa muValladolid, muna Gumiguru 17, 1920. Akazozivikanwa semunyori wetsika, kunyange hazvo akawana dhigirii remutemo, aive muzvinafundo muHistory of Commerce, mutori wenhau uye mukuru wepepanhau. Kuchamhembe kweCastile.
Kutanga kwayo mutsamba
Rake rakanakisa basa rekunyora rakatanga mukati meiyo genre yetsika novel na Mumvuri wecypress wakareba, nekuda kwayo, akagashira Mubayiro weNadal muna 1948. Mumakore gumi akatevera akaenderera mberi nebasa rake nemabhuku akasarudzika senge Kunyange izuva (1949), Nzira (1950), Mwanakomana wangu akanamatwa Sisi (1953) uye Shizha dzvuku (1959).
Miguel Delibes Setién akawedzera runyorwa rwake rwemabhuku akaisvonaka mukati memakumi emakore akateedzana game Makonzo (1962), Maawa mashanu naMario (1966), Hondo dzemadzitateguru edu (1975), Ivo vatsvene vasina mhosva (1981), Mukadzi mutsvuku pane grey kumashure (1991), Kuvhima (1992) uye Mupanduki (1998) pakati pevamwe. Zvakare, iye ndiye munyori wenyaya dzakagadzirwa zvakanaka senge Chakafukidza (1970), Muchinda akabviswa pachigaro (1973) uye Pfuma (1985).
Miguel Delibes uye cinema uye theatre
Mamwe emazita emunyori, akadai se Ivo vatsvene vasina mhosva, vaendeswa kumamuvhi. Zvakaenzana, Maawa mashanu naMario y Hondo dzemadzitateguru edu ivo vakagadziriswa kune yemitambo. Kunyora kwake kunoratidza kubatana kwakasimba kwazvo nekwaakabva, Valladolid, uye nechitendero, achipa maonero ake eKirisito akasununguka.
Maonero akatsoropodza nzanga
Sezvo ini ndichifambira mberió mune rake basa, Delibes Setién akachinjaó yakanangana nenzira yakakosha yenzanga ine mareferenzi akatanhamara kune akawandisa uye mhirizhonga yehupenyu mumaguta. Mazhinji emakakatanwa ake anotenderera pakushurwa kwekusarongeka kwenzanga, kuonga kwake kunoshamisa kwemabhuruni madiki, kurangarirwa kwehucheche uye kumiririrwa kwetsika nehunhu hwemamiriro ekumaruwa.
Iyo mibairo panguva yake yebasa uye kupera kwemazuva ake
Miguel Delibes Setién anoonekwa semumwe wevanyori vane mukurumbira vezvinyorwa zvemutauro wechiSpanish. Achikamu cheNadal Prize, zvishongo zvine mukurumbira zvaakawana zvaive Mubayiro weVatsoropodzi muna 1953, Muchinda weAsturias Award muna 1982, Mubairo weNyika weTsamba dzeSpanish muna 1991 uye neMiguel de Cervantes Prize muna1993.
Munyori makakurudzira mudhorobha rake raanoda, Valladolid, munaKurume 12, 2010. Iye zvino Iwe unogona kuwana iyo nyaya yehupenyu hwomunyori mahara zvachose pawebhu.
Ongororo yekufungidzira yeruzivo
Iyo zano rinotenderera neanonzwa, epfungwa uye emweya shanduko yaPedro. Nekuda kwekurasikirwa kunorwadza kwakaitika paudiki hwake uye paudiki, hunhu hukuru hunofunga kuti huparadzane nezvinhu zvese zvine kukosha kwazvo kwaari. Zvino, iyo inonzi "disallocation theory" inomuka, zita rakapihwa ne protagonist.
Kupararira kweruzivo urwu kune zvese zvine hunhu munoverengeka yekudzidza. Iyo uzivi hwepfungwa yekufungidzira inoputsika kuburikidza nekufungidzira kwekutanga kwehunhu muchimiro chemafungiro akaumbwa kwazvo mukati memirawo yechiKristu.
Iyi inova yaimiririra kunatsa kwaMiguel Delibes Setién. Iye munyori weValladolid airatidzira kwakanyanya mukukwanisa kubata nehunyanzvi hwakasiyana pakukwanisa kuva mugari, matambudziko emagariro, kuzvitonga uye kuita kwako pachako nenzira inoyerera. Munyori anoratidzawo chiono chake pahunhu, simba uye dzidzo sehunhu hwakakosha kuti uzokwanisa kuzvikurira muhupenyu.
Pedro ari kushungurudzika uye mukushushikana zvachose nekuda kwekurasikirwa kwekunzwa kwaanotambura nekufamba kwenguva. Inherera (haarangariri vabereki vake), anofanira kukura asina kudziya kwevanhu kwakakosha kuti mwana afare. Uku kushomeka kwakakwidziridzwa nevarairidzi vake: kutanga babamunini vake uyezve dzidzo yaakagamuchira kubva kuna Don Mateo, mudzidzisi akaisa maari kusafunga kwekuvapo.
Rufu magumo asingadzivisike anotora zvese zvine basa kuna Pedro: vadikanwa vake, shamwari yake Alfredo nenyika yekumusha kwake, ilavila. Hondo inorondedzerwa semumvuri unoparadza unosendamira pamusoro penzvimbo dzese dzakanyarara dzainobata. Mune ino mamiriro enhamo huru yekuvapo, Pedro anosarudza kuve mutyairi asina rudo uye asina zvinhu.
Iko kutya kwekutambudzika kunova kusina hutano kusvika padanho rekuti chero diki kurasikirwa kunowedzera chishuwo chako chekuzviparadzanisa nekuzvidzivirira. Naizvozvo, edza kudzivirira zvakanyanya sezvinobvira kusangana kwenguva yakareba nevamwe vanhu, zvinhu kana nzvimbo dzinogona kuunza rudo rwako. Nekudaro, Pedro haagone kubatsira kudanana naJane, nekudaro, chimiro chake chinodzikira uye anonzwa kunetseka zvakare.
Panguva yekupedzisira Kupfuura kwaJane kunodzosa pfungwa dzese, manzwiro, nematambudziko andinoedza nenzira yehana kudzivirira kubva paudiki hwake. Asi mudiwa akavhura moyo waPeter nenzira isingadzoreke. Nekudaro, iye protagonist anonzwisisa kuregedza seyakaitika chikamu muhupenyu hwake.
Pakupedzisira, Pedro akazvisununguraó yehuremu hwese hwekare nekugamuchira nekukoshesa imwe neimwe yenguva dzaanogona kurangarira, achipa kukosha kwakakosha kunguva dzaakakwanisa kugovana nevadikani vake. Iyo novel, pachayo, mune chinyorwa kukurudzira.
«Munguva iyi uye mukati mezviitiko zvese izvi ndakaramba ndichigara senguva dzose, ndega kwandiri. Hutano hwekunze hwaisakwanisa kundifambisa nekuti ndaisazviziva; Ndakaramba miedzo yake yese, uye pakasvika nguva apo pandakafunga kuti chiri chinhu chiri nyore kutevera pasina kuzeza mutsara wandakanga ndagara pamberi. Akatsigira kuvharika, hupenyu husina tsarukano, pasina mukurumbira ...
“… Hongu handina kuvashayawo. Ndakanga ndazviita ndirarame seizvi uye chero mutsauko wenguva pfupi waizonditsamwisa, zvichikurudzira mumweya mangu zvakasara zvekusava netariro kwangu. Nenzira iyi ndakapotsa ndazadzikisa pfungwa yekudzikama yandaitsvaga makore mazhinji apfuura: kurarama ndakazvimiririra, ndisina kubatana kwoushamwari, ndisina rudo ... Icho chete chinongedzo chakandisunga kune yangu yakapfuura ndangariro dzaAlfredo neimba. womudzidzisi wangu nenhumbi dzinokosha dzavagari vayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Iyo mumvuri wecypress wakareba, naMiguel Delibes
Delvis Toledo kubva kuCienfuegos akadaro
La sombra ... yaive kuverenga kwandisingakanganwi kwandiri: kufamba naPedro nemumigwagwa yehusiku yeEvila kwainakidza. Zvichida mamiriro ekusava netariro anotsamwiswa nevamwe vatsoropodzi kana vamwe vaverengi, asi ini ndinofunga ndaive chinhu chinoshamisa chinokwidziridza runyorwa nenzira yakasarudzika, iyo yandakaona zvishoma mune mamwe magwaro.
Pindura Delvis Toledo kubva kuCienfuegos
Mutumwa Mutumwa, naAnglica Puerto Tello